क्यालेन्डरको प्रचलन र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – 710917 | Bishow Nath Kharel
क्यालेन्डरको प्रचलन र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – 710917
Posted on January 3, 2015 by bishownath
(विश्वनाथ खरेल ) अहिले युरोपियन देशमा प्रचलित भएको क्यालेन्डर (पात्रो)लाई ग्रेगोरियन क्यालेन्डर भनिन्छ। प्राचीन रोम शहरमा प्रचलनमा ल्याइएका क्यालेन्डरलाई नयाँ रूप दिएर जुलियन क्यालेन्डर बनाइयो र पछि क्यालेन्डरलाई सुधार गरेर ग्रेगोरियन क्यालेन्डर बन्यो। इस्वी संवत् यही क्यालेन्डरद्वारा व्यक्त गरिन्छ। प्राचीन रोममा प्रचलित क्यालेन्डरमा पहिलो महिना २९ तारिखको भएमा दोस्रो महिना ३० तारिखको हुन्थ्यो। चन्द्रमाको कलासँग सम्बद्ध भएको यस क्यालेन्डरमा एक वर्षमा ३५४ दिन हुन्थ्यो। प्रत्येक तीन वर्षमा यो संख्या बदलिन्थ्यो। यो क्रमलाई झन्झट मानेर यसमा सुधार ल्याउन जुलियस सिजरले आदेश दिए। यसपछि मात्र इ.पू. ४५ को जनवरी १ तारिखका दिनदेखि सूर्यको गतिअनुसार एक वर्षमा ३६५ दिन हुने व्यवस्था भयो। प्रत्येक चार–चार वर्षमा एक दिन थपेर ३६६ को एक वर्ष हुने भयो। वर्षभरको महिना ३१ र ३० दिनमा बाँडियो। अपवाद फरवरी भयो। जुन सन्मा चारले भाग गर्दा शेष रहँदैन भने लिप एयरमा २९ दिनको एक महिना हुन जान्छ भने नन् लिप एयरमा शेष रहन्छ र फरवरी भने २८ दिनको महिना हुन जान्छ। इ.पू. ४४ मा जुलियस सिजरको मृत्यु भयो। वर्षको सातौं महिनामा उनको जन्मोत्सव परेकाले त्यो महिनाको नाम जुलियसको नाम दिई ‘जुलाई’ हुन पुग्यो। यो क्यालेन्डरको सुधारमा सम्राट अगस्टसले सहयोग गरेकाले वर्षको आठौं महिनाको नाम ‘अगस्ट’ राखियो। यो जुलियस क्यालेन्डरमा थुप्रै कठिनाइ भएकाले पोप ग्रेगोरी बाह्रौंले सुधार गरे, जुन अहिले पनि चल्तीमा छ।
बेलायत र अमेरिकी उपनिवेश रहेका देशमा सन् १७५२ सम्म पनि ग्रेगोरियन क्यालेन्डर लागू गरिएन। सोभियत रुसमा १९१८ सम्म लागू भएन। शुरु–शुरुमा रोमन वर्ष १ मार्चमा शुरु हुन्थ्यो। पछि इ.पू. १५३ मा १ जनवरीलाई वर्षको शुरु महिना मानिन थालियो। जुलियन र ग्रेगोरियन क्यालेन्डर लागू भएका ठाउँमा पनि जनवरी १ लाई वर्षारम्भ मानिदैन थियो। बेलायतका १४ शताब्दीसम्म २५ डिसेम्बरलाई १ वर्षको पहिलो दिन मानिन्थ्यो, त्यसपछि २५ मार्चलाई मानिन थालियो। सन् १९५२ सम्म पनि यही स्थिति रह्यो।
कतै–कतै ५ अप्रिललाई आर्थिक वर्षको शुरु दिन मान्ने परम्परा अझै ज्यूँदै छ। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको समयमा पनि ग्रेगोरियन क्यालेन्डरलाई सुधार गर्न खोजियो। तर यो धेरै टिक्न सकेन। यो क्यालेन्डर यस्तो थियो– २२ सेप्टेम्बर–२१ अक्टोबर, २२ अक्टोबर–२० नोभेम्बर, २१ नोभेम्बर–२० डिसेम्बर, २१ डिसेम्बर–१९ जनवरी, २० जनवरी–१८ फरवरी, १९ फरवरी–२० मार्च, २१ मार्च–१९ अप्रिल, २० अप्रिल–१९ मे, २० मे–१८ जुन, १९ जुन–१८जुलाई, १९ जुलाई–१७ अगस्ट, १८ अगस्ट–१६ सेप्टेम्बर। यसरी बाह्र महिनाको रूपरेखा तयार पारियो। यो क्यालेन्डर २२ सेप्टेम्बर १७९२ देखि १ जनवरी १८०६ सम्म लागू भयो। पछि नेपोलियनले ग्रेगोरियन क्यालेन्डर नै लागू गरेका थिए। क्यालेन्डरको वादविवाद ‘वोर्लड क्यालेन्डर एसोसियन’ न्यूयोर्कमा स्थापना भएपछि टुंगियो। यो संस्थाले शुरुको हप्ता आइतबार शुरु हुने, लिप यरको व्यवस्था र अरु विवादको टुंगो लगायो।
विश्वभर नै प्रचलनमा रहेको इस्वी संवत्को नयाँ वर्ष यही पुस १७ गतेदेखि न्यू एयर २०१५ को रूपमा शुरु हुँदै छ। आखिर कसरी आए यस्ता संवत्हरू प्रचलनमा ? केही चर्चा गरौं। इस्वी संवत् अर्थात् अंग्रेजी अक्षर एडी, विश्वभर प्रचलनमा रहेको वर्ष हो। एडीको अर्थ एनोडोमिनी होस्टी क्रिस्टी अर्थात् एनोडोमिनीको छोटकरी रूप हो। यसको अर्थ हुन्छ, जिसस क्राइस्ट जन्मिएको वर्ष। जिसस क्राइस्ट जन्मेको वर्षलाई एक वर्ष मानेर क्यालेन्डर बनाइयो। यसको अर्थ जिसस क्राइस्ट २०१५ वर्षअगाडि जन्मिएका थिए। जिसस जन्मिनुअगाडिको समयलाई बीसी अर्थात् बिफोर क्राइस्ट भनिन्छ। जिसस जन्मनु एक वर्षअघिको समयलाई एक बीसी भनिन्छ। एडीमा २०१४ पछि ०१५ आउँछ भने बीसीमा २०१५ पछि ०१४ आउँछ। हामीले प्रयोग गर्ने वि.सं.को अर्थ विक्रम संवत् हो। राजा विक्रम आदित्यले थालनी गरेको यो क्यालेन्डर अंग्रेजी क्यालेन्डरभन्दा ५७ वर्षअघि छ। यसको मतलब जिसस क्राइस्टको जन्मभन्दा ५७ वर्षअगाडि नै विक्रम आदित्यले आफ्नो क्यालेन्डर प्रयोगमा ल्याइसकेका थिए।
हामीकहाँ प्रचलनमा रहेको नेपाल संवत्को भने ११३५ वर्षपहिले शंखधर साख्वाले प्रचलनमा ल्याएका हुन्। त्यसबाहेक पनि विश्वका थुप्रै मुलुकमा आफ्नै रीति, संस्कृति र परम्पराअनुसारका क्यालेन्डर प्रयोगमा रहेका छन्। हरेक वर्षको निश्चित कुनै एउटा दिन, समय, तिथि सकिएर अर्को वर्ष शुरु हुनु वा प्रवेश गर्नुलाई नयाँ वर्ष भनिन्छ। यही नयाँ वर्ष प्रवेश गर्ने दिनलाई विभिन्न व्यक्ति, समुदाय र देशले आ–आफ्नै तोकिएको समय, दिन र तिथिअनुसार आ–आफ्नै परम्परा र शैलीमा नयाँ वर्ष भनेर मनाउने गर्दछन्।
विश्वमा प्रचलित दुई किसिमको पात्रो एउटा चन्द्रपात्रोअनुसार तिथिको आधारमा विभिन्न पर्व मनाइने हुँदा नयाँ वर्ष पनि तिथिकै आधारले मनाइन्छ भने अर्को सौर्य पात्रोअनुसार गतेका हिसाबले पर्वहरू मनाइने हुँदा नयाँ वर्ष पनि निश्चित गतेमा नै मनाइने गरिन्छ। अधिकांश नेपालीले सौर्यपात्रोअनुसार वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्छन्। नेपालीहरू नयाँ वर्ष शुरु हुनुभन्दा हप्तौंअगाडिदेखि नै शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, पिकनिक, नयाँ ठाउँ भ्रमण गर्न जाने गर्दै उत्साह र उमंगका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने गर्दछन्।
नेपालमै नेवार जनसमुदायले चन्द्रपात्रोअनुसार ‘नेपाल संवत्’ मनाउने गर्दछन्। यो संवत् शुरु हुने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथिमा हर्षोल्लासका साथ नयाँ वर्ष मनाउने गर्दछन्। त्यस्तै तामाङ, शेर्पा जातिले ल्होसार पर्वको नाम दिई चन्द्रपात्रोअनुसार आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउने गर्दछन् भने गुरुङ जातिले सौर्यपात्रोअनुसार प्रत्येक वर्षको पुस १५ गतेलाई नयाँ वर्ष मनाउने गर्दछन्। नेपालकै पश्चिमका केही जातिले माघ १ गतेलाई माघीको रूपमा र पूर्वतिर सिरुका पर्वको नाममा पनि नयाँ वर्ष मनाउने चलन छ। केही थारु जातिले नयाँ वर्षलाई चिराइ पर्वको रूपमा मनाउँछन्। मिथिलाञ्चलमा वैशाख २ गते जुडशीतललाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाइन्छ। विश्वलाई हेर्ने हो भने प्रायले जनवरी १ तारिखका दिन नववर्ष भनेर मनाउने चलन बढी रहेको छ।
Source : http://www.newsofnepal.com/new/bichar/2015/01/80092